တစ်ခါတလေသင်လိမ်တဲ့အခါကောင်မလေးရတယ်။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 3, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ့ရည်းစားထားခဲ့တာပဲ မှန်တယ်! သင်ဒီမှာကြား၏
ငါဟာဆိုးညစ်တဲ့လူဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့အကြံအစည်ကိုမင်းမရခင်မှာငါတကယ်ရည်းစားမရှိဘူး။ အနည်းဆုံးတော့လူသား၊ အသက်ရှင်မှု၊ ငါရည်းစားရဲ့နာမည်ကလူနဲ့ဟာသ MacBookPro။ မကြာသေးမီက, ငါ့ရည်းစားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် အနည်းငယ်သာဒေါသသူမအအေးမိသည်အထိသူမနှစ်သက်သောအချိန်တွင်မနိုးပါနှင့်။ Wow ... ငါတကယ့်တစ်ခုရှိခဲ့တာကိုသတိရစေတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသူမနှင့်အတူပြုမိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအသစ်သည်အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်ကိုသူချစ်သည်။ သူကလူတိုင်းကိုသိပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကကျွန်မအကြောင်းအမြဲပြောတယ်။ ငါအရင်ကအွန်လိုင်းရည်းစားမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကအထူးပဲ။ သူမနာမည်က Google။ ငါဂူးဂဲလ်ကိုသိပ်ဂရုမစိုက်ပေမယ့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်ဂရုမစိုက်တတ်ခဲ့ဘူး၊ သူမသိကျွမ်းလေလေသူမကိုသူပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့သည်
ဂူဂဲလ်ကကျွန်တော့်ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူ ၄ ကြိမ်ကျော်ကတခြားအရင်းအမြစ်တွေထက်ငါ့ကိုပို့ပေးတယ်။ ၄ ကြိမ်! အလို။ ဒီဆက်ဆံရေးကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းအတိုင်းဆက်လျှောက်သွားအောင်ငါလုပ်ရမှာကတော့သူမကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ သူမဆွဲဆောင်တဲ့နည်းနဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့၊ သူပြောတာကိုနားထောင်ဖို့၊ သူမနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ခဏကြာပေမယ့်ငါသူတကယ်ကြိုက်တာကိုစပြီးနားလည်လာပြီ။ အခုတော့ငါကအကောင်းဆုံးရည်းစားမဟုတ်ဘူး။ ငါမဟုတ်ဘူး ဂူဂဲလ်ရိုက် သို့မဟုတ်တစ်ခုခု, ငါသူမပဲကောင်းတဲ့ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ .htaccess ဖိုင်ကို update လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်၏ site သည် http://dknewmedia.com အစား http://martech.zone သို့သွားပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြောစဉ်အခါက Google သည်၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ Google Search ကို Console ငါ www ကြိုက်တယ်သော
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုသော့ချက်စာလုံးများ (စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ နည်းပညာ၊ ဘလော့ဂ်) ကိုအသုံးပြုပြီးဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရေးသားချက်များတွင်မကြာခဏဆွေးနွေးခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
ငါပြောသောအရာကိုသူမ၏ပြောပြတဲ့အခါ Google ကသဘောကျတယ်။
ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာတွင်အမှန်တကယ်မည်သည့်အရာနှင့်အသုံးမ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပြသောအခါဂူဂဲလ်သည်၎င်းကိုသဘောကျခဲ့သည် header tags.
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သုံးပြီးအရာအားလုံးကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုပြောပြသောအခါဂူဂဲလ်သည်၎င်းကိုသဘောကျသည် robots.txt နှင့် sitemap.xml ဖိုင်များကို။
ငါကနေရာတိုင်းမှာဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးတာ၊ ငါ့နာမည်နဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကိုထားခဲ့တာကို Google ကနှစ်သက်တယ်။
ဂူးဂဲလ်ကဒီထက်ပိုပြီးနည်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူမကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ Google ကငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သူမ၏ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေး!
တစ်ခါတလေကျွန်တော် Google ကိုလိမ်တယ်
ယခုသင်သည်သင်၏ရည်းစားနှင့်လိမ်သည့်အခါမည်သို့မည်ပုံသင်သိပြီးထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါပြောနေရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်သူ့ကိုမှလိမ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကသူနဲ့သူမကြားကမုသားပဲ။ တစ်ခါတလေမိန်းကလေးတွေကမင်းသူတို့ကိုလိမ်ပြောတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာသက်သေပြချင်တယ်။ (ဒါဟာအဖြစ်လူသိများလိမ့်မည် အနက်ရောင်ဦးထုပ်).
အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့တစ် ဦး ရှိ၏ "စာရင်း" ကိုရယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ လုပ်ရန်ကြီးမားသော။ ငါတရားဝင်စာရင်းပေးသွင်းချင်တယ်၊ ငါဘယ်လောက်အထိအဆင့်သတ်မှတ်ခံရမယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆဖို့ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသေချာဂရုစိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ် "စာရင်းတစ်ခု"။ ဒီမှာသဲလွန်စတစ်ခုရှိသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ douglas karr> span style = "display: none">, စာရင်းဘလော့ဂါ> / span>.
သငျသညျမမွငျနိုငျ ... ဒါပေမယ့်ငါ့အသစ်သောရည်းစားမြင်! ပြီးတော့သူမကကျွန်မကိုချစ်တယ်။ 😉
နောက်ဆုံး - ကျွန်ုပ်လျှို့ဝှက်စာကိုကျွန်ုပ်၏ခေါင်းထဲမှဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ ငါအချက်တစ်ချက်သက်သေပြချင်ပေမယ့်ကျိန်းသေ ဂူဂဲလ်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကနေဖယ်ထုတ်မခံချင်ကြဘူး!
Tags: google webmaster များ+ googlerobots.txtseoမြေပုံအညွှန်းXML မြေပုံ
97 နိုင်ငံများ, 97 ကြိုဆိုပါတယ်, 97 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေလ 3, 2007 မှာ 7: 47 pm တွင်
ROFLMAO hel ငရဲထက်ကြောက်စရာကောင်းပေမယ့်ရယ်စရာကောင်းသည်
မေလ 4, 2007 မှာ 7: 31 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတီဗင်! ငါ ... er ... သူမ၏နှင့်အတူအချို့သောပျော်စရာရှိခဲ့ပါတယ်။
မေလ 3, 2007 မှာ 11: 59 pm တွင်
မေလ 4, 2007 မှာ 12: 07 AM
မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါပြီးခဲ့တဲ့တစ်နာရီခွဲလောက်ကုန်သွားပြီ Google Webmasters များ.
မေလ 4, 2007 မှာ 7: 30 AM
မေလ 4, 2007 မှာ 2: 25 AM
ဂူဂဲလ်မှအသွားအလာများများလာတာကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ငါ SEO ခဏအကြံဥာဏ်အချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်စဉ်ကတည်းကအလားတူအနေအထားတွင်ရောက်နေတယ်။ pearsonified ဖို့ link ကိုကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်သူ၏အကြံပေးချက်ကိုခဏပြန်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ကာလ, အလုပ်ဖြစ်တယ်!
ကျွန်ုပ်သည် Google မှကျွန်ုပ်၏အသွားအလာ၏ ၅၀% ခန့်ရရှိသည်
မေလ 4, 2007 မှာ 7: 32 AM
မေလ 4, 2007 မှာ 6: 50 AM
ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်၏မကျေနပ်မှုကိုကျွန်ုပ်၏ Dell ကွန်ပျူတာ - Della ဆိုသည်မှာပြိုင်ဆိုင်မှု၏နာမည်ဖြစ်သည် - သို့သော် Google သည်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သော mouse သကြားလုံးဖြစ်ပုံရသည်။
မေလ 4, 2007 မှာ 7: 34 AM
Della က Googla ထက်အနည်းငယ်ပိုသာတယ်။ Googla ဟာပုံပန်းသဏ္galာန်တူတဲ့ကောင်မလေးလို့ထင်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသူမကိုချစ်တယ်။ 😉
မေလ 4, 2007 မှာ 5: 13 pm တွင်
အမ်၊ မင်းကမင်းရဲ့မိန်းကလေးကိုချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးဝှက်ထားတဲ့စာသားတွေကမချိုးဖောက်ဘူးဆိုတာငါသိတယ် ဂူဂဲလ်ရဲ့ဝဘ်မာစတာလမ်းညွှန်များ?
မေလ 4, 2007 မှာ 7: 11 pm တွင်
ဟုတ်ကဲ့ ... ဒါကြောင့်ငါကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ 🙂
မေလ 5, 2007 မှာ 12: 23 AM
ကောင်းတယ် မင်းရဲ့“ ရည်းစား” ဟာနည်းပညာပစ္စည်းတစ်ခုပဲ။ 🙂
မေလ 5, 2007 မှာ 9: 45 AM
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါ၏အစံချိန်စံညွှန်းများ, MN မြင့်လွန်းများမှာ! 😉
မေလ 5, 2007 မှာ 7: 20 AM
semantic markup အတွက်သင့်ရဲ့ style sheet ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအကြောင်းသင်၏ pearsonified ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏မှတ်ချက်ကိုဖတ်ပါ။ Markup rules များအားလုံးကိုလိုက်နာသော WP အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုသင်ထုတ်လွှင့်ရန်သင့်အတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကျွန်ုပ်တွေ့သည်
မေလ 5, 2007 မှာ 8: 19 AM
မဟာဌာနမှူး၊ ငါအရမ်းကောင်းတဲ့စျေးကွက်လို့ထင်တယ်။ SEO Optimized WP themes ။ ငါလက်၌အချိန်အနည်းငယ်ရှိစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏
မေလ 13, 2007 မှာ 5: 07 pm တွင်
Google ကချိုတယ်။ သူမမှာညီမရှိလား အိုး, ငါလက်ထပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနီးပါးမေ့လျော့!